ikhaya AMANQAKU E-FOOTBALL AFRIKA Abadlali bebhola baseNigeria UVictor Osimhen Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-LB iveza iNqaku elipheleleyo le-Genius yebhola yaseNigeria ngegama "Vic". Ibali lethu leVictor Osimhen yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawuleyo ukusuka ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku.
Ubomi kunye nokuvuka kukaVictor Osimhen. IiCredits Zemifanekiso: Vanguard, I-NigerianNewsDirect kunye ne-Twitter
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba nguye Umntu onetalente egqwesileyo enamehlo Ukufumana amanqaku amahle. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abajonga i-Biology kaVictor Osimhen enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
UVictor Osimhen Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
Ukuqala, amagama akhe apheleleyo nguVictor James Osimhen. UVictor Osimhen njengoko wayeqhele ukubiza njalo wazalwa Umhla we-29th ka-Disemba 1998 kumama wakhe ongasekhoyo kunye noyise, uMdala uPatrick Osimhen kwisixeko saseLagos, eNigeria. Wayengowokugqibela kubantwana abathandathu abazelwe abazali bakhe abathandekayo aboniswe ngezantsi.
UVictor Osimhen Bazali- Utata wakhe- Umdala uPickick & umama ongasekhoyo. Ikhredithi yemifanekiso: I-NigerianNewsDirect kunye ne-IG
Abazali bakaVictor banemvelaphi yosapho lwabo oluvela eSouthern Nigeria ngokuchanekileyo i-Esan South East Local Government yase-Edo State eNigeria. Ifani yosapho lwayo "Osimhen”Lithetha 'Ulungile'kulwimi lwendalo lweIshan.
Njengabaninzi ababalaseleyo bebhola e-Ningizimu Nigeria, uVictor Osimhen wayevela kwimvelaphi yosapho olubi. Phambi kokuba azalwe, abazali bakhe bathatha isigqibo sokufudukela kwisixeko sase "Lagos”Ikomkhulu lezoqoqosho eNigeria. Naxa ndandiseLagos, usapho lwalujamelana nobunzima, enye eyayiluma kangangokuba uVictor omncinci, owayesengumntwana, wenziwa ukuba ajongane nelanga kwindawo yokugcwala eLagos apho umama wayethengisela amanzi asachet ukongeza umvuzo wakhe.
UVictor Osimhen wakhula kunye nomntakwabo uAndrew kunye ne-4 abanye abantakwabo e-Olusosun, a uluntu oluncinci olujikeleze iOregun, Ikeja, Lagos. Olu luntu luhlala enye yezona ndawo zokulahla ezikhulu e-Afrika. Ukukhula kwiminyaka yakhe yobudala, uVictor Osimhen waqhoboshela wamanzi amdaka kunye nezinye izinto zasekhaya ezitratweni ngenjongo yokunyusa imali yokufunda kunye nokusinda kosapho. (I-TheNationOnlineng Iingxelo).
UVictor Osimhen Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Imfundo kunye neBraduer Buildup
Isikolo samabanga aphantsi i-Olusosun awayefunda kuso sasebenza njengendawo yokuhlangana yebhola kubo bonke abafundi besikolo kunye nolutsha ekuhlaleni.
Isikolo saseprayimari i-Olusosun- apho uhambo lwebhola lwaqala khona. Ityala: iLagosSchoolsOnline
Rhoqo ngokuhlwa, amakhwenkwe amaninzi kubandakanya uVictor ahamba aye ebaleni ukuze abukele umntakwabo omkhulu owayeyinkwenkwe yebhola lendawo ekuhlaleni. Izibulo lokuqala kusapho lwabo eligama linguAndrew layeka imfundo yakhe ukuze lifumane imali yokugcina uVictor nabanye abantwana basekhaya.
Umntu owayekade egadalala, uVictor wafunda nokudlala ibhola kubulela umntakwabo omkhulu, uAndrew. Wayenomdla kwiChelsea FC njengoko wayebukele iqela lidlala kumaziko okubukela. Ekunye namalungu osapho lwakhe babengabalandeli abakhulu beqela laseNigeria (iSuper Eagles). Inkxaso yeqela kunye nothando lwayo lokudlala imidlalo kudala umnqweno wokuba yingcali.
Ukubona ukuba umntakwabo omncinci wayenetalente nangakumbi, uAndrew kwafuneka awushiye umdlalo ukuze ajongane neshishini lakhe lephephandaba. Uye wayilahla into yokuqhubela phambili imfundo yakhe ukuze akwazi ukukhulisa imali yokunceda umntakwabo omncinci awakhulela ekubeni yintshatsheli.
UVictor Osimhen Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala
Akuzange kuthathe xesha ngaphambi kokuba iphupha losapho liqale ukuhlawula njengoko abadlali bebhola ekhatywayo baqaphela into ekhethekileyo ngoVictor emva koko bammemela eUltmate Strikers Academy eLagos apho wayelingo lakhe lokuqala eliphumeleleyo.
Ngonyaka we-2014, ukusebenza kukaVictor Osimhen kunye ne-Ultimate Strikers kumbona ukuba amenywe yi-coach Amuneke ukumela ilizwe lakhe i-U-17 iqela. Phawula: Iqela lesizwe laseNigeria le-U-17 lebhola ekhatywayo elibizwa ngokuba yiGolden Eaglets, lelona qela lincinci elimela ilizwe laseNigeria kwibhola ekhatywayo. UVictor Osimhen waba negalelo ekuncedeni iqela ukuba lilungele INdebe yeHlabathi ye-U-17 yeFIFA ebibanjelwe eChile.
Umnyhadala we-2015 FIFA U-17: Victor U-Osimhen waba nesiqalo esihle kolu khuphiswano njengoko ebetha amanqaku amabini aphambili kule mpumelelo, ephumelela izigidi zeentliziyo kubandakanya nezo zivela kwelaseYurophu. U-Osimhen wayethathe inxaxheba ebalulekileyo kwimpumelelo ye-U-17 yaseNigeria kwiNdebe yeHlabathi yeFIFA eChile. U-Asides unceda ilizwe lakhe ukuba liphumelele ukhuphiswano, umNigeria onetalente naye wafaka amanqaku awona manqaku aphezulu emva kokufumana amanqaku e-10 kunye ne-FIFA U-17 yeNdebe yeHlabathi yeBhola yeHlabathi.
UVictor Osimhen unokwenzeka ngeFIFA yakhe ye-U-17 yeNdebe yeHlabathi yeGolide kunye neBhola yeSilivere. IiCredits: Jumia kwaye Amakhulu amaxesha
UVictor Osimhen Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Indlela eya kwiNdaba ibali
Emva kweNdebe yeHlabathi, kwatyhilwa ukuba iiklabhu ezinkulu ezivela eYurophu, ukuthanda kweArsenal, isixeko seMan, kunye neTottenham Hotspur, emva kweenkonzo zakhe. Ukothuka, uVictor Osimhen wenqaba zonke izibonelelo kuba enye iklabhu yenqanaba eliphakathi yayinike imali enkulu.
Emizuzwini emva kokuba ebizwa i-2015 African Player Player of the Year kwii-CAF amabhaso e-Abuja ngoJanuwari 2016, u-Osimhen wabhengeza kwihlabathi ukuba uzakuqhubeka nomsebenzi wakhe wobugcisa kunye neqela laseJamani iBundesliga, eWolfsburg. Ngokutsho kwakhe, ukuqinisekiswa kweklabhu kunye nemali, yayiyeyona nto iphambili ekukhuthazeni usapho lwayo kwaye ikhetha ukudlala iklabhu yaseJamani endaweni yayo nayiphi na indawo ephezulu eYurophu.
I-Agony yaseJamani: U-Osimhen utyikitye isivumelwano seminyaka emithathu enesiqingatha sangaphambi kweJuni 2020 kwaye wenza idutywa lakhe kwindiza ephezulu yaseJamani ngoMeyi 2017. Nje emva kweenyanga ezine zokwenza i-Bundesliga yakhe yamatyala, iingxaki zaqala ukulayisha eNigeria. Ukwenzakala egxeni kwamenza ukuba enze utyando olwalusenza ukuba kuphele ixesha lakhe lokugqibela. Ukugqiba kweli nqanaba lihlwempuzekileyo, uVictor Osimhen (ofanekiselwa ngezantsi) akazange abonakale kwiklabhu ephezulu.
UVictor Osimhen ujonge ethembeni njengoko wayesilwa nokulimala kunye nokugula eJamani. Umthombo we-Twitter.
Ubusuku be-Osimhen buqhubeka emva kokuphola kwakwenzakala egxeni. Ngeli xesha, yayikukugula okwaqhubeka, okwamenza ukuba aphuthele ixesha lonyaka langaphambi kwexesha kwaye eyona nto ibuhlungu, ephoswa kukhetho lwendebe ye-2018 eNigeria. Ubusazi?… Wayesesibhedlele ngexesha leNdebe yeHlabathi yeRussia ye-2018 yeFIFA.
UVictor Osimhen Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ukunyuka Kwidumo Ibali
Kwathatha u-Osimhen malunga namaxesha anobuhlungu e-2 ukuphuma kwamaxesha amabi obusuku. Ukungahambelani ngenxa yokulimala kunye nokugula kumbona efaka amanqaku kwi-zero (0) eWolfsburg ngaloo ndlela konakalisa umsebenzi wakhe kwinkqubo.
Ukuqhubeka, u-Osimhen wenza isigqibo sokuya kwiilingo zasehlotyeni kunye neeklabhu zaseBelgium uZulte Waregem kunye neClub Brugge, ngelo xesha ezazintshatsheli ezazilawula. KWAKHONA, Impilo yakhe yabe iliwa phantsi njengoko wayegula sisifo seengcongconi esachaphazela imeko yakhe yomzimba senza zombini iiklabhu ukuba zimgatye.
Kwi-22 Agasti 2018 yayingumhla Oothixo bebhola Waba nenceba kuye. Yayilusuku leqela laseBelgian uCharleroi lamamkelayo kwisivumelwano semali mboleko yexesha elide. UVictor Osimhen wenza i-dut yakhe epheleleyo kwi-22 kaSeptemba, efumana amanqaku akhe okuqala njengengcali ene-backheel. Emva komdlalo, u-Osimhen uxelele BBC ukuba wayenayowalufumana ulonwabo lwakhe kwakhona emva kokulinda ixesha elide".
UVictor Osimhen ekugqibeleni ulufumene ukonwaba kwakhe emva kokulinda ixesha elide. Ityala kwi injongo
Isigulana saseNigeria sasinegalelo eliphumelelayo kunye necala laseBelgian, sidlala imidlalo ye-36 kwaye sifaka amanqaku e-20, i-feat eyenze iklabhu yakhe, uCharleroi, yokuvuselela ukhetho lwabo lokufumana ngelixa ebolekwe. Emva kokulawula ibhola eBelgium, umNigeria waziva ilixesha elifanelekileyo lokubuyela ngendlela njengomdlali okhokelayo wase-Afrika. NgoJulayi 2019, wenza inkqubela phambili kwikhondo lakhe ngokusayina kwiLille OSC.
UVictor Osimhen Khuphela iBali leNdaba. Ityala lemifanekiso: injongo
Endaweni yokuqunjelwa kukulimala kwamagxa kunye nesifo seengcongconi, umhlaseli waseNigeria wakhula esomelela amandla, enyamezelela ukunyuka kweMeteoric ukuya kwinqanaba eliphezulu KWAKHONA, yenye yezona ndawo zishushu zebhola eAfrika. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
UVictor Osimhen Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ulwalamano lobomi
Ngokunyuka kwakhe udumo kwi-Yuropu, kuqinisekile ukuba abalandeli abaninzi banokubuza malunga nokuba uVictor Osimhen, njengaxesha lokubhalwa, unayo intombi.
Ngubani uVictor Osimhen Girlfriend? Ityala lemifanekiso: IG
Akukho nto iyiphikayo into yokuba iimpawu zika-Osimhen ezithandekayo kubandakanya ukuqaqamba, ukuthembeka, ukusebenza nzima kunye nokuthobeka akunakwenza ukuba amanenekazi akholelwe ukuba angayenza inkwenkwe ebhetele.
Phambi kokuba lidume, yayikrokrelwa ukuba u-Oshimen wayethandana nentombazana encomekayo egama linguSbusiso. Ngexesha labo lobudlelwane, bobabini abathandi bahlala babelana ngemifanekiso nganye kwi-Instagram. Ulwalamano olutyholwa ngo-Osimhen nentombi yakhe lwenziwe esidlangalaleni malunga ne-2 iminyaka ngaphambi kokuba athathe isigqibo sokucima imbonakalo yakhe kuyo yonke into ayidlalayo kwimidiya yoluntu.
UVictor Osimhen Intombazana eyintombazana
Ukusukela emveni kokuba ulwazi lwayo lucinywe kwimidiya yakhe yezentlalo, amahemuhemu ayesekhona, awayesithi uSibusiso wayengeyiyo intombi ka-Osimhen kodwa ngumfazi wakhe owayethengisiwe. Ukujonga ukuphatha imidiya yakhe yezentlalo, akukho lwazi malunga nomtshato wakhe okanye umtshato wakhe kuSbusiso. Nangona kunjalo, Kusenokwenzeka ukuba angatshata naye kodwa akhethe ukungawubeki esidlangalaleni.
Ngexesha lokubhala, u-Osimhen ubonakala engatshatanga kwaye ukhethe ukugxila kwimisebenzi yakhe kunokukhangela intombi okanye ukwenza esidlangalaleni ubudlelwane bakhe.
UVictor Osimhen Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bomntu
Ukwazi uVictor Osimhen Ubomi bakho buqu kude nebhola kunokukunceda ufumane umfanekiso olungileyo lomntu wakhe. Ukuqala kwayo, ngumntu okwaziyo intsingiselo yokwenyani yokugcinwa nokunyamezelana, umyalezo osoloko ukwifoto yakhe ye-whatsapp.
"Khange ndaphazanyiswa nangayiphi na indlela ngamagqabaza amabi kunye nezinto ezazibhalwe ngam ngexesha lam eWolfsburg,". Kwakhona, ngala mazwi akhe, unokufumana lula ukuba ungumlo.
Ngaphandle kwebhola ekhatywayo, uOsimhen uthanda ukumamela umculo weR & B womculo wakhe awuthandayo osaseleyoNdiyakholwa ukuba ndingabhabha", Isanti yomculo ophathwayo R Kelly. Ngamanye amaxesha, ucula ingoma kaKelly ngendlela yakhe ngexesha lokubhiyozela iinjongo zakhe. Kwindawo yomculo waseNigeria wase-Nigeria, u-Osimhen unamathela kunye no-Olamide kunye nomkhondo wakhe awuthandayo ukusuka kumculi we-hip-hop waseNigeria ngu 'ehleli etroneni '.
UVictor Osimhen Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi Bentsapho
UVictor Osimhen, ophatha ukondla usapho lwakhe uyakuvuyela ukufumana indlela yosapho lwakhe kwinkululeko yezemali yonke imibulelo yebhola. Onke amalungu osapho (njengoko kubonisiwe ngezantsi) awayemi ecaleni kwakhe ngexesha lakhe lobumnyama, ngoku ziyonwabele zonke iintsapho eziziphetheyo ngebhola ekhatywayo.
UVictor Osimhen Amalungu osapho. Ikhredithi kwiNigerianNewsDirect
Malunga noTata kaVictor Osimhen: UPa Patrick Osimhen ungumzali osindileyo kunye noyise ka-Victor Osimhen. Wayefudula engumphathi wonyana wakhe de kwaba li2015 xa wayenikezela ngoxanduva lolawulo kwiarhente yaseFrance uOliver Noah weNoga Sports Management.
Utata kaVictor Osimhen (wesibini ukusuka ekunene), unyana wakhe kunye neqela loLawulo lweMidlalo laseNoga. Ityala kwi AllNigeriaSoccer
Xa uPatrick Osimhen wayengumlondolozi osemthethweni wonyana wakhe, wabaleka waya ematyaleni nabanye oothunywashe bezama ukumbambela kwilinge lokufumana imali yokudluliselwa kunyana wakhe eWolfsburg. Ezi seti zabantu ngelixa bezama ukugqitha kuye, bakhetha ukujongana nonyana wakhe wokuqala, u-Andrew Osimhen ngaphezulu kothethathethwano lwesivumelwano noVictor Osimhen.
Malunga noMama kaVictor Osimhen: Ngokwengxelo, kubonakala ngathi umama kaVictor Osimhen uhambile. Umhlaseli waseNigeria njengoko ngexesha lokubhala ehlonipha umama wakhe ngokuba nefoto yakhe njengomfanekiso weprofayile kwi-akhawunti yakhe ye-instagram.
Umama kaVictor Osimhen. Ityala kwi-Instagram
UVictor Osimhnen Siblings: UVictor unabantakwabo abathandathu xa bebonke kwaye u-Andrew Osimhen aziwa kakhulu kunabo bonke abanye abantakwabo. Uthando lukaVictor Osimhen ngoodadewabo alunamida. Ubusazi?… Waye wanikezela imbasa yakhe yeGolide Boot komnye udade wabo emva kokuba ebeleke umntwana oyintombazana ngela xesha wayiphumeleleyo ibhaso, malunga noNovemba 2015.
UVictor Osimhen Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - yokuPhila
Ngexesha lokubhala, uVictor Osimhen ixabiso lentengiso liye lenyuka ngaphezulu kwe13,00 mil. € ngokuya Dlulisa uMakethi. Njengoko kuqatshelwe kwisiphatho sakhe semithombo yeendaba zentlalo, le mali ihlawulwa kwimivuzo engagungqiswanga ibe yindlela yokuphila enobukhazikhazi ngokuchatshazelwa ziimoto ezinomtsalane, izindlu kunye ngamanye amaxesha, amantombazana.
UVictor Osimhen uhlala indlela elula yokuphila. Ityala kwi-Instagram
Ukujonga emva ekukhulisweni kwakhe ngenkani kunye nemvelaphi yosapho ehluphekileyo, kuyacaca ukuba u-Osimhen kufuneka abelomhlaba kwaye kufuneka azi ukuba angazilawula njani iimali zakhe.
UVictor Osimhen Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Inyaniso engekho
Imbambano Yintsapho: Ikamva likaVictor Osimhen lalikhe laphoswa kukudideka kulandela intlekele yosapho ngokudluliselwa kwakhe. Amalungu osapho lwakhe ayephikisana omnye komnye malunga nokuba ngubani omele umdlali.
Ngokwengxelo zakwi-Intanethi, umalume ka-Osimhen, uMichael, wayekhe wakhokela iqela labasebenzi ngelixa uAndrew, umphathi wakhe omkhulu welinye iqela. Omabini la maqela ayenabameli bawo abaye balwa ngokudlulisela iimali kunye namalungelo ayinyani okumela umdlali. Ingxaki yosapho yafumana imeko entsha xa kwavela iingxelo zosasazo zokuba utata ka-Osimhen wabethwa ngoozwilakhe ngenxa yokwala kwakhe ukuhambisa umdlali eWolfsburg. Kwaye kwathiwa kamva ibubuxoki. Kuthathe ixesha elithile ngaphambi kokuba ingxaki yentsapho iphele.
Iqela laseNigeria leNursery Nigerian: NgoJanuwari 1, 2017, uVictor Osimhen wagqithiselwa ngeedola3,970,225 kwiklabhu yaseJamani iVfL Wolfsburg esuka kwi-Ultimate Striker Academy, iklabhu yasekhaya eLagos.
Ubusazi?… Imali yokutshintshelwa kwamenza ukuba abe ngomnye wabadlali ababiza kakhulu ukuba atyikitywe ngqo kwiqela lase-Afrika kwiqela laseYurophu. Kubalwa elireyithi lotshintshiselwano ngexesha lokubhalwa, I-Ultimate Strikers academy ithole ispping ye-1.4 billion ye-Naira evela kuVictor Osimhen ukudluliselwa.
Kutheni egqibe eBelgium: Uninzi lwabemi baseNigeria bakhetha ukuqala umsebenzi wabo waseYurophu kwi-Belgian First Division A. Le ligi ibiyiMecca kubadlali bebhola baseNigeria kwiminyaka edlulileyo kunye neyodwa eyanika uVictor Osimhen impumelelo yakhe yebhola yaseYurophu.
Ubusazi?… Umqeqeshi wangaphambili wase-Nigles wase-Nigeles ongasekhoyo uStephen Keshi okhokelele ekukhutshweni kweetalente zaseNigeria ukuzalisa iBelgium kwi-1980s esekupheleni. Ukuthandwa kukaDaniel Amokachi, uVictor Ikpeba, uCawa u-Oliseh kunye no-Alloy Agu bonke baqala umsebenzi wabo eBelgium. Qaphela: yayiseBelgium uCelestine Babayaro aphumelele imbasa yakhe ye-Ebony izicathulo zomdlali ogqwesileyo wase-Afrika kwiligi ye-Belgian.
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda ibali lethu leVictor Osimhen Ubuntwana kunye neNqaku leBritold Biography. Ku- LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
UWilfred Ndidi Ibali leNtsana ngeNgcaciso yeBriography Facts
I-Odion Ighalo Ibali lokuBantwana kunye neNgcaciso yeBriography Facts
I-Alex Itbi Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
I-Ahmed Musa Childhood Indaba I-Untold Biography Facts
Iindaba ze-Victor Moses Childhood Story Plus Untold Biography Facts
UMikel Obi Ibali lokuBantwana kunye neNgcaciso yeBriography Facts